January 14, 2020 – ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
Posted on January 14, 2020 (January 29, 2020) by bgoper
ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးအောင်ကိုမင်းသည် အ. ထ. က ပန်းတင်ကျောင်း၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်သော ပညာရေးစုံညီပွဲတော်နှင့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့က တက်ရောက်၍ ဆုရရှိသူများအား ဆုများ အသီးသီးချီးမြှင့်‌ပေးအပ်ခဲ့သည်။ […]
မီးဘေးသင့်ပြည်သူများအား အိမ်ထောင်စုနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ၁၄ ကတ်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် ပြည်သူလူထုတွေ့ဆုံပွဲသို့ ဝေါ ၁ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဉီးမျိုးကြည် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ […]
Posted on January 14, 2020 (March 12, 2020) by bgoper
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီနှင့် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ ပူးပေါင်းအစည်းအဝေးကို ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ပူးပေါင်းကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ […]
စေတီတော်စိန်ဖူးတော်တင်အခမ်းအနားနှင့် ပညာရေးစုံညီပွဲတော်သို့ တက်ရောက်
ပေါက်ခေါင်း(၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းနိုင်သည် ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် စေတီတော်စိန်ဖူးတော်တင်အခမ်းအနားနှင့် ပညာရေး စုံညီပွဲတော်သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ […]